ပါမောက္ခဦးခင်မောင်ဝင်း (အသည်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)
—–၊ ပါမောက္ခဦးခင်မောင်ဝင်း (အသည်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. အသည်းရောင်အသားဝါစီပိုးရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။ A. အသည်းရောင်အသားဝါစီပိုးရှိတဲ့အခါမှာလည်း ဘီပိုးလိုပဲ အစောပိုင်းမှာ လက္ခဏာမပြတတ်ပါဘူး။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် သွေးစစ်လိုက်တဲ့အခါကျမှ၊ နိုင်ငံခြားသွားဖို့၊ သွေးလှူဖို့ သွေးစစ်လိုက်တဲ့အခါကျမှ စီပိုးတွေ့ကြတာများပါတယ်။...
—၊ ပါမောက္ခဦးခင်မောင်ဝင်း (အသည်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. အသည်းရောင်အသားဝါဘီပိုးရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေရှိပါသလဲ ဆရာ။ A. ဘီပိုးရှိပြီ၊ ရောဂါလက္ခဏာပေါ်ပြီဆိုရင် Too late နောက်ကျသွားပြီ။ ၆ လ-တစ်နှစ်ပဲ နေရတော့မယ်။ ဘီပိုးရှိသူက...
—–၊ ပါမောက္ခဦးခင်မောင်ဝင်း (အသည်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. အသည်းအဆီဖုံးခြင်းက မျိုးရိုးလိုက်တတ်ပါသလား ဆရာ။ A. အသည်းအဆီဖုံးတာက မျိုးရိုးလိုက်ပါတယ်။ အသည်းအဆီဖုံးဖို့ မျိုးရိုးဗီဇ (Gene) တွေရှိရင် ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ “မြန်မာပြည်မှာတော့ အလွယ်ဆုံးနည်းပြောလိုက်ရင် အာထရာဆောင်းရိုက်တာပဲ။ အာထရာဆောင်းရိုက်လိုက်ရင်...
—–၊ ပါမောက္ခဦးခင်မောင်ဝင်း (အသည်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. ဆိုးဆေးပါတဲ့ အစားအသောက်တွေစားရင် အသည်းကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ မှန်ပါသလားဆရာ။ A. ဆိုးဆေးမှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Edible dye ဆိုတဲ့ စားလို့ရတဲ့ဆိုးဆေးနဲ့ Chemical dye...
—–၊ ပါမောက္ခဦးခင်မောင်ဝင်း (အသည်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. အရက်နဲ့ ဘီယာသောက်တာမှာ ဘယ်အရာက အသည်းကို ပိုမိုထိခိုက်စေပါသလဲ ဆရာ။ A. အရက်က အရက်ပဲ။ အတူတူပဲ။ ဝိုင်သောက်မလား၊ ထန်းရည်သောက်မလား၊ ဝီစကီသောက်မလား၊ ရမ်သောက်မလား ....
ပါမောက္ခဦးခင်မောင်ဝင်း (အသည်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း Q. အသည်းခြောက်/အသည်းကြွပ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ A. အသည်းခြောက်/အသည်းကြွပ်တယ်ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဖြစ်အများဆုံးက ဘီပိုး၊ စီပိုးကြောင့်ပါ။ နောက်တစ်ခုက အရက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အသည်းအဆီဖုံးတာကြောင့် အသည်းခြောက်တာ အဖြစ်များလာနိုင်ပါတယ်။...
မြန်မာလူမျိုးအများစုကြားရှိသည့် အသည်းရောဂါဆိုင်ရာ အယူအဆမှားများ
ပါမောက္ခဦးခင်မောင်ဝင်း (အသည်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း – အသည်းရောင်အသားဝါဘီပိုးကနေ စီပိုး ဖြစ်သွားတတ်တယ် ဒါကလည်း လူအတော်များများကြားမှာ တွေ့နေရတဲ့ အယူအဆမှားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘီပိုးကနေ စီပိုး မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ – ပန်းသီးစားရင် ဘီပိုးကူးတယ် ဒါကလည်း ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုလွှင့်လိုက်သလဲ...
အသည်းရောင် အသားဝါ အေရောဂါ ကာကွယ်ဆေး . .
မေး။ အသည်းရောင်အသားဝါ အေရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရပါသလား ဆရာ။ ကြူကြူ ၊ လှိုင် ။ ပါမောက္ခဦးခင်မောင်ဝင်း (အသည်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ။ အသည်းရောင် အသားဝါ အေရောဂါ ကာကွယ်ဆေးကို ဘာမှ စစ်စရာမလိုဘဲ အခုတစ်လုံးထိုး၊ နောင်ခြောက်လကြာရင် တစ်လုံးထိုး...